Beautify keung wa: အရှင်၏ဘ၀တစ်ကွေ့
Beautify keung wa
နမောတဿဘဂ၀တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နမောတဿဘဂ၀တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ။
အရှင်သည် နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)တွင်2007ခုနှစ်မှာသာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယ B.A(Buddhism)ဘွဲ့ကိုရရှိပြီး2010ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဂဓတက္ကသိုလ်တွင်
နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့ပြီး အသက်၂၂နှစ်တွင်ချင်းတောင်တန်း နယ်စပ်ဒေသသာသနာပြုတာဝန်ကို ၂၀၀၆-၂၀၀၇ခုနှစ်ချင်းပြည်နယ်၊ပလက်ဝမြို့နယ်၊ဗုဒ္ဓဂါမကျေးရွာ၊ဗုဒ္ဓဂါမထေရ၀ါဒသာသနာပြုကျောင်းတွင်၂-နှစ်တိတိသာသနာပြုတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈.ခုနှစ်တွင်ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ပန်းဦးတောင်ကျေးရွာသို့ပြန်လာပြီး အမေ့ရွာစာပျိုးခင်းလူငယ်စာကြည့်တိုက်ကိုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။စာကြည့်တိုက်မှာစာပေမျိုးစုံကိုဖတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။စာအုပ်အရေအတွက်တစ်နှစ်အတွင်း၃၀၀၀ကျော်တိုးပွားအောင်အားထုတ်ခဲ့သည်။ထိုနှစ်အတွင်းရွာဦးကျောင်းတွင်အနန္တဇိနလောကထွဋ်ခေါင်အလိုတော်ပြည့်စေတီတော်မြတ်ကို ဦးဆောင်၍တည်ထားခဲ့သည်။ ဥာဏ်တော်အမြင့်၂၅တောင်နှင့်အရံစေတီ၂၄ဆူဖြစ်သည်။
ထိုနောက်၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ဝေဠုကျောင်းတိုက်၊တန့်ယန်းမြို့၊ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် စာပေပို့ချ၍သာသနာ့ပြုတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:15 AM
EUROPALACE, Casino, FX, CASINO CLUB, Online counter
ကံစီမံလို့ လူတန်းစား ကွဲပြား၇ပုံ
သူ့ကိုသတ်ဖြတ်၊သက်တိုတတ်၊ မသတ်အသက်ရှည်။ ညှဉ်းဆဲသူများ၊အနာများ၊သနားကျန်းမာမည်။ ဒေါသမီးလျှံ၊အကျည်းတန်၊သည်းခံလှပမည်။ မနာလိုပြန်၊ခြွေရံကွာ၊ကြည...
"၁၅၀၀ အချစ်" နဲ့ "၅၂၈ မေတ္တာ" ဖြစ်လာပုံ
အချစ်အကြောင်း ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုက "၁၅၀၀ အချစ်" နဲ့ "၅၂၈မေတ္တာ" ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲ...
၉။ ပါပ၀ဂ္ဂ Chapter 09 ၁၁၆။ အဘိတ္ထရေထ ကလျာဏေ၊ ပါပါ စိတ္တံ နိဝါရယေ။ ဒန္ဓံ ဟိ ကရောတော ပုညံ၊ ပါပသ္မိံ ရမတီ မနော။ ၁၁၆။ မကောင်းမှု၌စိတ်သည် မွေ့လေ...
အနော်ရထာမင်း (မြန်မာ ၃၇၆-၄၃၉)အား အနော်ရထာမင်းစောဟူ၍လည်း တွင်သည်။ အနော်ရထာမင်းသည် ပထမ မြန်မာ မွန် ပျူ နိုင်ငံတော်ကြီးကို စတင်တည်ထော...
မြန်မာတိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုး
ကချင်တွင် လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁၂ မျိုး ရှိသည်။ (၁) ကချင် Kachin (၂) တရုမ်းTaron Taron (၃) ဒလောင် Dalaung (၄) ဂျိန်းဖော Jin...
ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါး အရဟံ – ကိလေသာ ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။ ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ပင် မကောင်းမှုကို ပြုတော်မမူသော မြတ်စွာဘုရား။ ...
နိုင်ငံတကာတိပိဋကရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ ဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့မှ ၁၂ရက်နေ့ထိ(၂.၁၂.၂၀၁၂)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြေမြတ်မဟာဗုဒ~ဓဂယာဒေသ နိုင်ငံတကာတိပိဋကရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ...
ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်စဉ်အကျဉ်း ဘုရားအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားသည် ကပိလ၀တ်ပြည့် ဘုရင် သုဒ္ဓေါဒန မဟာရာဇာ၏ သီရိမဟ...
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်း လည်ပုံ , ဖြတ်ပုံ, ဒေသနာတော်
Add caption ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မူအရ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်း လည်ပုံ , ဖြတ်ပုံ, ဒေသနာတော် ------လင်္ကာဆောင...
ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ ပုတီးစိပ်
သရဏဂုံ (၃၀) မန္တာန်တော်ကြီး--- ပထမဦးစွာ ဇာ-ဘော-ဇီ-ယာ-မ-မ-အ-အ-နိ-နိ-ဟူသော ခေါင်းစဉ် ၁၀-ချက် အရကျက်ရမည်။ (၁) ဇာတိပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာ...
majjhama traveller (7)
sound and alarm
အရှင်သည် နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)တွင်2007ခုနှစ်မှာသာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယ B.A(Buddhism)ဘွဲ့ကိုရရှိပြီး2010ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဂဓတက္ကသိုလ်တွင်m.a(philosophy)ဘာသာရပ်ကိုဆက်လက်သင်ကြားနေသည်။အရှင်သည်အသက်၁၇နှစ်တွင်ပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ပြီးအသက်၁၈နှစ်တွင်နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့ပြီး အသက်၂၂နှစ်တွင် ချင်းတောင်တန်း နယ်စပ်ဒေသသာသနာပြုတာဝန်ကို ၂၀၀၆-၂၀၀၇ခုနှစ်ချင်းပြည်နယ်၊ပလက်ဝမြို့နယ်၊ဗုဒ္ဓဂါမထေရ၀ါဒသာသနာပြုကျောင်းတွင်၂-နှစ်တိတိသာသနာပြုတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈.ခုနှစ်တွင်ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ပန်းဦးတောင်ကျေးရွာသို့ပြန်လာပြီး အမေ့ရွာစာပျိုးခင်းလူငယ်စာကြည့်တိုက်ကိုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။စာကြည့်တိုက်မှာစာပေမျိုးစုံကိုဖတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။စာအုပ်အရေအတွက်တစ်နှစ်အတွင်း၃၀၀၀ကျော်တိုးပွားအောင်အားထုတ်ခဲ့သည်။ထိုနှစ်အတွင်းရွာဦးကျောင်းတွင်အနန္တဇိနလောကထွဋ်ခေါင်အလိုတော်ပြည့်စေတီတော်မြတ်ကို ဦးဆောင်၍တည်ထားခဲ့သည်။ ဥာဏ်တော်အမြင့်၂၅တောင်ဖြစ်သည်။ထိုနောက်၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ဝေဠုကျောင်းတိုက်၊တန့်ယန်းမြို့၊ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် စာပေပို့ချ၍သာသနာ့ပြုတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အရှင်သည် (၀)တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်သည်။လူမျိုးဘာသာ၊ သာသနာအတွက်ပို၍တိုးတက်ဆောင်ရွက်စေနိုင်ရန် ယခုအခါအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ဆက်လက်ပညာရှာဖွေနေသည်။
ဒီလိုအလုပ်မျိုးကို ဆက်လုပ်ပါ။ ။
expertenglish.com: The Leading Expert English Site on the Net
Forum Discussions - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
How to Cook Discussions - Myanmar in Singapore
Colaborador de este espacio
KEUNG WA | Writing away with Blog.com
Sa riang wa
အပြုံးပန်းဈေးခင်း - ယုံကြည်ချက်ဆိုတာ မြစ်လိုမပြတ်တမ်းစီးဆင်းပြီး သစ်ပင်ပန်းမန်းတွေလိုဝေဆာခြင်းပါပဲ!
Everyone's Blog Posts - FutureDream
Dhamma Zay Ti Sayar Taw
ThisIsMyanmar.com Group of Web Sites.
Latest Activity on Mitta Aye Yeik
Short Stories & Classic Literature from around the World
မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ မှ နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများ
Latest Activity on deounews(ဒယ်အိုးသတင်း)
Sitagu Buddhist Vihara - Theravada Dhamma Society of America (Austin, Texas)
Everyone's Blog Posts - buddhismworld
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ (၃၆) မှတ်မှတ်ရရ နေ့တနေ့
ယနေ့ ရေးသော တရားတော်များ
တဏှာ (၃) မျိုး တရားတော်
english blogs I like the best
BuddhaSasana Buddhist website - English Section
Buddhist News Channel | Buddhist Channel | Buddhist News Headlines
Dharma Publishing - Welcome
Diamond Way Buddhism Australia - Buddhist Meditation Centres of the Karma Kagyu Lineage
Myanmar travel to myanmar photos yangon hotels myanmar girls
NEW YORK BUDDHIST VIHARA :: NY Buddhist Temple Vihara Queens
NYT > Buddhism
Listen to ‘The Daily’: When Facebook Rumors Incite Real Violence
Social Networking News - Upcoming
Urban Dharma / Buddhism in America
Washington Buddhist Vihara
What-Buddha-Taught.net (((((0))))) PEACE in KNOWING & SEEINGaHandful of Leaves